क्यान्डी नाश स्तर 829 सुझाव र युक्तिहरू - क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
तिमि यहाँ छौ: घर / वर्गीकृत / क्यान्डी नाश स्तर 829 सुझाव र युक्तिहरू
संसारमा केहि निश्चित छैन. ब्रह्माण्ड निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ. यो मांसपेशिको युगबाट बुद्धिको युगमा परिवर्तन भयो. एक शताब्दी पहिले, मांसपेशि man व्यक्ति कडा र मनमोहक मानिन्थ्यो. यद्यपि अब सबैभन्दा मूल्यवान व्यक्ति सबैभन्दा बढि ब्रेनपावरको साथ एक हो. यसैले, यदि तपाइँ आजको संसारको A-सूचीमा हुन चाहनुहुन्छ भने तपाइँ दिमागी शक्तिको साथ तपाइँको खेलको शीर्षमा हुन आवश्यक छ।. त्यसैले, त्यसो गर्ने राम्रो तरिका मस्तिष्क व्यायाम हो. निश्चित रूपमा, एक उत्कृष्ट र रमाइलो व्यायाम Candy Crush हुन सक्छ!
अचम्म छैन, यो एक साधारण खेल खेल को रूप मा सुरु हुन्छ, समान टुक्राहरू सँगै ल्याउन, जुन जो कोहीले खेल्न सक्छ, तर वास्तविकतामा, यो देखिन्छ भन्दा धेरै कठिन छ. जसरी हामी खेलमा अगाडि बढ्छौं, खेल मा खेल अग्रिम को स्तर अधिक र अधिक जटिल हुन्छ. यस बाहेक, वस्तुहरू प्राप्त गर्न को लागी एक जोडी भन्दा बढी लिन्छ र उद्देश्यहरू पूरा गर्न टाढाको विचार हुन्छ ताकि तपाईं स्तरको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि चलाखीपूर्ण चालहरूको लागि तपाईंको मस्तिष्कलाई रटल गर्नुपर्दछ।, चरणहरूको न्यूनतम संख्यामा.
वास्तवमा, एक राम्रो चुनौती स्तर हो 829 र तपाइँको मस्तिष्क प्रयोग गर्ने र चलाखीपूर्वक काम गर्ने तरिका भनेको प्रयोग गर्दैछ क्यान्डी क्रश स्तर 829 धोखा दिन्छ र सल्लाह.
यो स्तरको उद्देश्यहरूको सेट पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ अर्को चरणमा जानका लागि. स्तरको उद्देश्यहरू 829 सिर्जना गर्न को लागी हो 25 धारीदार क्यान्डीहरू र 10 लपेटिएको क्यान्डीहरू, भित्र 40 सीमित कदमहरू. Apart from this make sure that you have earned 100,000 points as well. This might seem like something every easy in words butaplayer knows how difficult these things can be. This is why we are providing you with क्यान्डी क्रश स्तर 829 धोखा दिन्छ र सल्लाह. In the age of intelligence working smart is the best option!
क्यान्डी क्रश स्तर 829 धोखा दिन्छ र सल्लाह
You should start with the impactful candy bombs to solve candy crush level 829. तपाईँ सँग छ 25 steps to defuse these candy bombs. अब,asmart move would defuse these bombs in the middle of the field. The middle would be the ideal place for impactful diffusion. यो एक धेरै चुनौतीपूर्ण कार्य हो त्यसैले तपाईले यसको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन.
थप विशेष मिठाई बनाउनुहोस्! स्ट्रिप गरिएको र बेरिएको क्यान्डीहरू अन्य क्यान्डीहरू भन्दा रुचाइन्छ. तपाईंले यी उद्देश्यहरूलाई हटाएर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. पछि,4एउटै रङको कैंडीहरूले तिनीहरूलाई बनाउन सक्छ. यसबाहेक, तिनीहरू तेर्सो रूपमा गठन गर्न सकिन्छ, ठाडो, T, वा एल आकार. प्रयोगकर्तासँग आकारको विकल्प छ.
वास्तवमा, तपाईंले तलको कँडीहरूमा सामेल हुनेमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ. क्यान्डीहरू माथिबाट तल जान्छन्. तल्लो क्षेत्रको क्यान्डीहरूले चेन प्रतिक्रिया सिर्जना गर्न सक्दछन्. यो अधिक प्रभावशाली हुनेछ.